रसुवाको हाकुका गुठी पीडित किसानले पाए लालपुर्जा - Ratopati
रसुवा, जेठ २२ – पुस्तौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित भएका हाकुबासी गुठी पीडितले बल्ल लालपुर्जा पाएका छन् । साविकको हाकु गाविस वडा नं. २,३,४,५,६ र ७ गरी ७ वटा वडा हाल पार्वतिकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. १ र २ मा बसोबास गर्ने किसानसँग जग्गाधनी थिएन । उनीहरूले जोतखन र संरक्षण गरेको जमिनको स्वामित्व भने काठमाडौंस्थित स्यम्भु घ्याङ् गुठीको नाममा दर्ता थियो । हाकुबासी लामो समयदेखि भूमि अधिकार अभियानमा सङ्गठित भई आफ्नो जग्गाको अधिकार लिन लागि सङ्घर्षरत थिए ।
२१ जेठ २०७४ मा रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा आयोजना भएको एक कार्यक्रमकाबीच हाकुका गुठी पीडित किसानलाई मोही पुर्जा वितरण गरिएको हो । लालपुर्जा पाएसँगै उनीहरू खुसी भएका छन् । धुन्चेमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च, रसुवा र असाहाय बालबालिका विकास केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ६० परिवार किसानलाई पहिलो चरणमा रातो लालपुर्जा वितरण गरिएको हो । यस्तै, हाकुमा स्थापना भएको असाहाय बालबालिका विकास केन्द्रले प्रति परिवार ७ हजार रुपियाँ आर्थिक सहयोग पनि वितरण गरेको छ ।
कार्यक्रममा रसुवा जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपाने, स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे, मालपोत कार्यालय प्रमुख गणेश श्रेष्ठ, गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्वु तामाङ, पार्वतिकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुुङ तामाङ, लगायत दलका प्रतिनिधहरु सहभागि थिए ।